Nwee ndidi. Ihe oma diri ndi n’echere. - Amaghi ama - Quedia Pedia
Nwee ndidi. Ihe oma diri ndi n’echere. - Amaghi ama
Ndidi bụ isi ihe na-eweta ihe ịga nke ọma. Ọ bụrụ n ’enweghị ndidi zuru ezu, ọ ga-esiri gị ike iru ogo ihe ịga nke ọma na ndụ. Anyị ga-aghọta na oge ụfọdụ ọnọdụ adịghị n'akụkụ gị. Anyị makwaara na ị na-alụ ọgụ oge niile na ndụ gị. Maka nke ahụ, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịnwe ndidi na olile anya. I nwere ike iche na o nweghị ihe fọdụụrụ gị.
Agbanyeghị, nkwupụta a na-ekwu na echiche gị ezighi ezi. Ọnọdụ ọjọọ bụ otu n'ime akụkụ ndị a na-apụghị izere ezere na ndụ anyị. Youkwesịrị ịghọta na a ga-enwe ma ọnọdụ ọjọọ ma ihe ọjọọ. Mana ihe ị ga - eme bụ inwe ndidi. N’ikpeazụ, will ga - ahụ na ihe ọma ga - amalite ime gị. N’oge ahụ, ị ​​ga - adị ka nwoke ma ọ bụ nwanyị kachasị nwee obi ụtọ n’ụwa.
Yabụ, gbaa mbọ mee ka ị dị ọcha. Ka obi sie gi ike na ihe oma ga-eme gi. Havekwesịrị ịghọta eziokwu na ndidi bụ isi ihe niile. Ndidi agaghị enyere gị aka ime ka obi ruo gị ala, kamakwa ọ ga-enyere gị aka isoro ndị nwere ịhụnanya nwekwuo mmekọrịta.
Yabụ, ọ bụrụ n’ị bụ nwoke nwere ndidi nke nwere ọhụụ n ’anya, onweghi onye nwere ike igbochi gị iru ebe ịchọrọ.
N’agbanyeghi etu mgbaru ọsọ gị siri ike iru, ọ bụrụ n’inwe ndidi, ị nwere ike mezuo ebumnuche gị n’enweghị nsogbu ọ bụla. Gaghị enwe nsogbu ọ bụla. Iji mee ka nkwupụta a sikwuo ike, anyị ga-achọ ịmara na ndidi na-enyere aka inweta ezigbo ahụike. Yabụ, ị nwekwara ike ịtụle ya ka ọ bụrụ otu n’ime ihe ọma nke ahụ were ndidi.
Ezi okwu mkpalite okwu
Ezigbo Okwu ụtụtụ dị mma
Ezi Short Quotes
Ikwuputa onu ahia ututu oma
Obere mkpirisi mkpirisi okwu
Ihe niile ga adi nma. Ma eleghị anya ọ bụghị taa, mana n'ikpeazụ ọ ga-eme. Tụkwasị Chineke obi. Jidesie olile anya gị ike. Chineke anaghị ada ada. - Amaghi ama
Ndụ nwere ihe ndị ọ na-eto. Ọ bụrụ na ị na-agafe usoro ọjọọ taa, daa jụụ…
Positivebụ nke ọma apụtaghị ileghara ihe ọjọọ anya. Positivebụ ezigbo mmadụ pụtara ịgbanahụ ihe ọjọọ. Enwere nnukwu ọdịiche. - Amaghi ama
Positivebụ nke ọma apụtaghị ileghara ihe ọjọọ anya. Positivebụ ezigbo mmadụ pụtara ịgbanahụ ihe ọjọọ. Enwere nnukwu ọdịiche.…
Obi ụtọ abụghị ị nweta ihe ị chọrọ oge niile. Ọ bụ ịhụ ihe gị n'anya na inwe ekele maka ya. - Amaghi ama
Odi nma, anyi nile nwere udiri ochicho. Anyị na-emekwa ihe niile iji mezuo ihe niile…